मिडिया असफल भइरहेको छ किनकि आफैमा विश्वासको कमी छ Martech Zone
बिहीबार, मे 1, 2014 शुक्रबार, मे 2, 2014 Douglas Karr
हिजो मैले संग एक महान कुराकानी थियो ब्राड शूमेकर, एक लामो मिडिया ईतिहासको साथ स्थानीय मिडिया विशेषज्ञ रेडियोलाई डिजिटल युगमा तान्ने प्रयास गर्दै। यो यस्तै भयो कि अर्को साथी, रिचार्ड सिसकल्स, कार्यालय मा हिंडे। रिचार्डको पनि रेडियोमा ठूलो इतिहास थियो। हामीले रेडियो ईन्डस्ट्रीको बारेमा एक टन कुरा गर्‍यौं र मैले हिजो राती यसबारे सोच्न जारी राखें।
As हावा बेच्दै गिरावट जारी छ र रेडियो साम्राज्यहरू सिंडिकेट र समेकित गर्न जारी रहन्छ, यसले वास्तवमा परम्परागत मिडियाको समस्याको समस्यालाई औंल्याउँछ ... तिनीहरू अब आफैलाई विश्वास गर्दैनन्। मलाई लाग्छ कि यो अखबार र टेलिभिजनको साथ समान समस्या हो। निजीकृत, विभाजन, स्थानीय र सामाजिक प्रविधि अपनाउनुको सट्टा ... यी उद्योगहरू विपरित दिशामा बढ्न जारी राख्दछन्। यसले जानकारीको स्रोत र यसको साथ कनेक्ट हुन प्रयास गर्ने श्रोता बीच दूरी सिर्जना गर्दछ।
समेकन र सिन्डिकेशन व्यवसाय संसारमा ठुलो अनुहार वाक्यांश हो। तिनीहरू लागत बचतको पर्यायवाची छन्। यदि तपाइँ तपाइँको प्रतिभा केन्द्रीकृत र यसको पहुंच को विस्तार, यो केवल तार्किक छ कि तपाइँ सामग्री को उत्पादन को लागत कम। रेडियो स्टेशनहरू राष्ट्रिय ताराहरूलाई सिंडिकेट गर्दछ र तिनीहरूका स्टेशनहरू खाली छोड्दछन्। समाचार पत्रहरूले एसोसिएटेड प्रेस लेखहरूलाई धक्का दिन्छ र स्थानीय कर्मचारीहरूलाई घटाउँछ। टेलिभिजन स्टेशनहरूले बजारमा प्रतिभाको व्यापार गर्न जारी राख्छन् र कारोबार बृद्धि भएको छ।
यो किनभने तिनीहरू अब आफ्नो प्रतिभा मा विश्वास गर्दैनन्। यदि सोशल मिडिया र ब्लगि usले हामीलाई केहि सिकाएको छ भने, यो विविध, निजीकृत, विभाजित, भावुक सामग्रीको माग बढ्दो छ, खस्कँदै जाँदैन। व्यक्तिहरू अधिक जानकारी खोज्दै छन्, कम होईन, तिनीहरूको जीवन, उनीहरूको रुचि, तिनीहरूको व्यवसाय र सरकारको बारेमा। सामाजिक माध्यमले टेक्नोलोजीको कारण आकाशमा उकास्न सकेन, उनीहरूले आकाश छुन किनभने तिनीहरू आफैले विश्वास गरे।
कुनै पनि परम्परागत मिडिया साइट भन्दा अगाडि नहेर्नुहोस् र यो उही पुरानो बकवास हो ... ध्यान भ advertise्ग गर्ने विज्ञापनको समुद्रको बीचमा अड्केको सामग्रीको ड्यास। अधिक विज्ञापन भनेको अधिक राजस्व सहि छ? सही छैन। तिनीहरू धेरै सामग्री पतित गर्दैछन जुन हामी सब भन्दा मूल्यवान छ। र अब उनीहरूले प्रदान गरिरहनुभएको औसत सामग्रीको मूल्य गिरावटमा छ। फेरि ... मध्यमको कारणले होईन, तर यसको पछाडि आवाजको उत्कटताका कारण।
रेडियो स्टेशनहरू, विशेष रूपमा, अडियो गुण, मनोरन्जन, र व्यक्तिगत पहुँच को स्वामी हुन्। किन तिनीहरू ध्यान केन्द्रित गर्न जारी छ हावा बेच्दै सट्टामा बेच्ने आवाज म भन्दा टाढा छ। म कुनै पनि रेडियो स्टेशनमा हिंड्न सक्षम हुनेछु र उनीहरूको दरहरू व्यावसायलाई उनीहरूको आफ्नै अडियो कार्यक्रमहरू विकास गर्न, मोबाइल र वेब अनुप्रयोगहरू मार्फत ती कार्यक्रमहरू वितरण गर्न, र सही दर्शकहरूलाई पहिचान गरेर, लक्षित गरेर र उनीहरूको व्यवसायमा राजस्व ड्राइभ गर्न मद्दत गर्न सक्दछ। कार्यक्रमहरू पनि एयरवेजमा चलाउन आवश्यक पर्दैन! माध्यमले केही फरक पार्दैन ... यो आवाजको उत्कट विश्वास हो कि सुनेको छ भन्ने कुराको महत्त्व छ।
म पक्का छैन कि अखबारहरूका लागि आशा छ - मृत रूखहरूमा प्रिन्ट गर्न जारी राख्न आवश्यक पूर्वाधार र त्यस सामग्री वितरण गर्न धेरै महँगो छ। तिनीहरूले प्रेसलाई डम्प गर्नुपर्दछ र उनीहरूको पैसालाई स्थानीय प्रतिभामा लगानी गर्नुपर्दछ। टेलिभिजन आशाको साथ एक मात्र देखिन्छ ... सामाजिक अँगालेको छ र ईन्टरवेजको माध्यमबाट तिनीहरूको अविश्वसनीय माध्यम धकेलेर भोका दर्शकहरूले यसको लागि प्रतिक्षा गरिरहेका छन्। म तिनीहरूलाई व्यवसाय र ग्राहकहरूको लागि ढोका खुल्ला देख्न चाहन्छु जो भिडियो कलको स without्केत बिना नै भिडियो प्रयोग गर्न चाहन्छन्, आफ्ना भिडियोहरू उत्पादन गर्न, वितरण गर्न र मुद्रीकरण गर्न पनि सक्दछन्।
म परम्परागत मिडियालाई मन पराउँछु र यी माध्यमहरूको प्रत्येक पछाडि मानिसहरुको शक्तिमा विश्वास गर्न जारी राख्छु। म चाहन्छु कि तिनीहरू आफैले विश्वास गरे।
नोट: म पढ्छु ट्विटर को लागी एक Eulogy ट्विटर अन्तर्क्रियाको गिरावटमा। विडम्बनाको कुरा, केहि दिन अगाडि मैले एउटा प्रेस विज्ञप्ति देखें जुन ट्विटरको आकर्षण हो वृद्धि... अर्को १ million लाख प्रयोगकर्ताहरू। मलाई डर छ कि ट्विटर पारम्परिक मिडियाको अनुसरण गर्दै छ, ध्यान केन्द्रित गर्दै नेत्रगोल सूचनाको गुणवत्ताको सट्टामा यसले प्रदान गर्दछ। म आशा गर्दिन ... तर हामी हेर्नेछौं।
टैग: विश्वास गर्नुहोस्ब्लगिंगअखबाररेडियोसामाजिक संजालटेलिभिजन